Dainik Samaj | किन एमसीसी टोलीले प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा पहिले ओलीलाई भेट्दैछन् ? - Dainik Samaj किन एमसीसी टोलीले प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा पहिले ओलीलाई भेट्दैछन् ? - Dainik Samaj
काठमाडौं भदाै २४। सडकमा यतिखेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) काे बिराेध दिनानुदिन चर्कदै गइरहेकाे छ। यही अवसरमा चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौं आइपुगेकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्दै छिन्।
बिहीबार बिहान काठमाडौं आइपुगेकी फातिमाले ओलीलाई दिउँसो भेट गर्न लागेकी हुन् । ‘एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले आज दिउँसो २ बजे बालकोटमा ओलीज्यूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ’, ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले भने।
ओलीसँगको भेटपछि फातिमाले भोलि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम छ। ‘उपाध्यक्ष फातिमा र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच भोलि भेट्ने कार्यक्रम छ’, प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सहयोगी गोविन्द परियारले भने, ‘तर, समय तय भइसकेको छैन । भोलि भेट्नु हुन्छ । समय भने आज अबेरसम्ममा तय भइसक्छ।’
त्योभन्दा अगाडि उनले विपक्षी दलका नेता एवं एमालेकअध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ।